सात महिनामा बागमती प्रदेशको पुँजीगत १७ प्रतिशतः यति खर्च हुनु पनि अत्यधिक होः सचिव घिमिरे — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > सात महिनामा बागमती प्रदेशको पुँजीगत १७ प्रतिशतः यति खर्च हुनु पनि अत्यधिक होः सचिव घिमिरे
सात महिनामा बागमती प्रदेशको पुँजीगत १७ प्रतिशतः यति खर्च हुनु पनि अत्यधिक होः सचिव घिमिरे
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा बागमती प्रदेशले २०.४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार यो ७ महिनाको अवधिमा जम्मा २०.०४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
चालु आवको लागि विनियोजन गरेको ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा ७ महिनामा १० अर्ब ३० करोड ६१ लाख ३१ हजार ९५९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
२०.०४ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा यो अवधिमा पुँजीगत खर्च भने १७.४६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यस्तै चालु खर्च भने २०.९ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले पुँजीगत तर्फ २५ अर्ब ३९ करोड ४५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ४ अर्ब ४८ करोड ३ लाख २७ हजार १६७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै चालु तर्फ २५ अर्ब ३ करोड २९ लाख १५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब २२ करोड ५८ लाख ४ हजार ७९२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यता प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डुन्डुराज घिमिरे गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष खर्च अत्याधिक वृद्धि भएको बताउनु हुन्छ । गत वर्ष यो अवधिमा ११ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको उहाँको भनाई छ । यो वर्ष बढेर २०.४ प्रतिशत हुनु भनेको ठूलो छलाङ मारेको घिमिरेको दाबी छ । ‘सात महिनामा २० प्रतिशत मात्रै खर्च हुनु भनेको राम्रो त होइन’ उहाँले भन्नुभयो ‘ विगतका वर्षहरुको तुलनामा हेर्दा यो धेरै नै राम्रो हो ।’
अहिले संघीय सरकारको खर्च पनि यस्तै अनुपातमा रहेकोले संघीय सरकारको र आफ्नो प्रदेशको बजेट खर्च उस्तै उस्तै अवस्थामा रहेको उनको भनाई छ ।
पहिलो चार महिना टेन्डरमा तथा आवश्यक तयारीमा जाने र त्यसपछिको तीन महिना काम भइरहने तर भुक्तानी हुन बाँकी रहने गरेको उहाँको भनाई छ । केहीको काम गरेको भुक्तानी हुन बाँकी र कतिपय काम भइरहेको कारण खर्च कम देखिएको घिमिरेले बताउनु भयो ।
गत वर्षको पुस मसान्तमा ९.१ प्रतिशत मात्रै काम भएको र यो वर्ष यो अंक बढेर १७ प्रतिशत पुगेको उहाँको भनाइ छ । गत वर्ष ६० प्रतिशत खर्च गरेकोमा चालु आवमा बजेट खर्भ ७० प्रतिशत कटने उहाँको दाबी छ । यो आधारलाई हेर्दा अहिले प्रदेश सरकार बजेट खर्चको सन्दर्भमा कमजोर अवस्थामा नरहेको उहाँको दाबी छ ।
प्रदेश सरकारको यो आवमा भौतिक पूर्वाधार, कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लगायतका क्षेत्र रहेका छन् । यो अवधिमा धेरै बजेट कृषि क्षेत्रमा गएको उहाँले बताउनु भयो ।
२०७७ फागुुण १३ गते ११:५१ मा प्रकाशित
माग भन्दा बढी आवेदन परेपछि नागरिक बचतपत्रको बिक्री बन्द
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भौचर, छाप किर्ते गरी १ करोड बढी अपचलन गर्ने व्यक्ति पक्राउ
श्रमिकको न्युनतम तलब बढाउँदै, कति वृद्धि हुने ?
बजारमा आयो होण्डा हर्नेट १६० आर मोटरसाइकल !
एसएलसीको नतिजा सार्वजनिक, हेर्नुहोस् नतिजा !
नेपालमा थपिए कोरोना संक्रमित, संक्रमित हुनेको संख्या १३ पुग्यो